Filimka Dabaqa ee loogu talagalay SPC / LVT / WPC
Taxanaha Filimka Dabaqa
Naqshadeynta rooti naqshadeynta Dabaqa Filimka
Naqshadeynta hadhuudhka dhagaxa Filimka Dabaqa ah
Naqshadeynta hadhuudhka qoryaha Dabaqa Filimka
Taxanaha Filimaanta silsiladda kulul
Foil loogu talagalay Xaashida Marble UV
PS Fils For the Lines Khadadka
Filimka PVC Lamination
Taxanaha Filimka PVC Lamination
Taxanaha Guud ee Filimka 'PVC Design'
YS BRAND SPC sagxadda filimka dabaqa: YSD-1128
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YSB-81012 3. Qaab dhismeedka wax soosaarka: PVC 4.Soocitaan: 500M / ROLL 5.MOQ: 8000M / Code Wood alwaaxda darbiga alwaaxda PVC Xirfadle xirfadle ah dhammaan noocyada guryaha, dukaamada, makhaayadaha, shaaha lagu cabo, qurxinta KTV. Waxay ku habboon tahay xurmaynta dusha sare ee looxa alwaaxda, saqafka dusha sare ee darbiga, safka duuban, macromolecule loox weyn, guddiga xariiqda xagalka, guddiga fiber-ka dhexdhexaadka ah, guddiga galaaska, guddiga looxa, saxanka birta, astaanta birta caagga ah, iwm sidoo kale waa la isticmaali karaa waayo, wax taaj oo kale caaryada nuugista ...
1. Width: 0.64 meter / 1.26Meters 2. Code: YSB-86032 3. Qaab dhismeedka wax soo saarka: PVC 4. Tilmaanta: 500M / ROLL 5. MOQ: 8000M / Code 6. Daaweynta Dusha sare: Gadaal 7. Midab: sida sawir ama Macaamiil Shuruudaha 8. Waxay ku yaalliin: Zhuji, Zhejiang, China PVC Lovely bear Pattern Lamination Film 1. Xaashida waxaa lagu qori karaa loox alwaaxyo kala duwan ah (plywood, guddiga walxaha, fiberboard, loox alwaax, iwm.) Iyo qalab kale (sida cadaadiska sare) guddiga sibidhka, guddiga asbestos, xaashi bir ah, aluminium iyo astaamaha birta, iwm ...
1.Width: 1.26Meter 2.Code: YSB-88001 3. Qaab dhismeedka Wax soosaarka: PVC 4.Soocitaan: 500M / ROLL 5.MOQ: 8000M / Code YS BRAND PVC Flash Gold Flower Lamination Filim 1.Ka ilaalinta deegaanka iyo adkeysiga walxaha derbiga ku dahaaran ayaa hore uga dhaafay waraaqda gidaarka ee tayada iyo ilaalinta deegaanka. Laga soo bilaabo kobaca degdega ah ee iibinta darbiyada isku dhafan sanadihii la soo dhaafay, waxaan arki karnaa in sabuuradda isku dhafan ay aad iyo aad ugu sii badaneyso macaamiisha ..
1. Width ： 1.26Meters 2. Code: YSB-92003 3. Qaab dhismeedka wax soo saarka: PVC 4. Faahfaahinta: 500M / ROLL 5. MOQ: 8000M / Code 6. Customization: Haa.Waxaa laga heli karaa ballaca duudduuban, Dhumucdiisuna iyo dherer ahaan 7. Dhumucdiisuna . Hufnaanteeda ayaa ka wanaagsan tan polyetylen, laakiin waxay ka sii liidataa tan polystyrene, oo leh darajo cayiman. 2. P ...
1. Width: 1.26Meters 2. Code: YSB-92010 3. Qaab dhismeedka wax soo saarka: PVC 4. Faahfaahinta: 500M / ROLL 5. MOQ: 8000M / Code 6. Range of Application: Khadka albaabka, alaabta xafiiska, kabadhada, astaamaha alwaax, musqusha, miisaska kumbuyuutarka windowsill, sanduuqa hifi, musqusha, iwm. 7. Codsiga: qurxinta guriga, qurxinta derbiga 8. Nooca: Guud ahaan 9. OEM: HAA WAAN SAMEEYN karnaa 10 Waqtiga Kaydinta: 1-2 sano Warshad Shiine ah oo si toos ah u iibinaysa filim cajalado PCV ah, filim saadaal ah 1. Miisaan khafiif ah, kuleylka kuleylka, ilaalinta kuleylka, qoyaan ...
1.Product Code: YS-1027 2.Waxab: 1260CM 3.Material: PET 4.Thickness: 0.028mm 5.Specification: 500M / roll ama Customized 6.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Design Hot Stamping Foil 1.PVC marmar bireedka shaabad kulul ayaa inta badan lagu dabaqaa warqadda marmarka UV iyo darbiyada. Waxay noqon kartaa qaab marmar qeexitaan sare, hadhuudh iyo noocyo naqshad naqshadeysan. Ka dib dusha filimka wareejinta ee UV, dahaadhka PU wuxuu leeyahay dhejis wanaagsan. Badeecadani waxay ku habboon tahay noocyo kala duwan oo substrates ah oo habka kala iibsiga kala duwan ah, b ...
Code Product: YS-1034-5 Width: 1.26M Qaabdhismeedka wax soo saarka: filimka PET + Off lakabka + Lakabka difaaca + Lakabka Qurxinta + Lakabka Taageerada Dhumucdiis: 0.028mm Qeexitaanka: 500M / duub ama sida looga baahan yahay. MOQ: 5000M / Code YS BRAND UV wareejinta hadhuudhka marmarka UV ee guddiga UV. Badeecadani waxay ku habboon tahay noocyo kala duwan oo substrates ah oo habka kala iibsiga kala duwan ah, laakiin sidoo kale noocyo kala duwan oo daaweyn ah oo duubis ah ama filim ah. Dusha sare ee guddiga UV qurxinta waa rinjiga ilaalinta deegaanka-bilaash ah, w ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1046 3.Material: PET + UV Rinjiga 4.Specification: 500M / Roll 5.MOQ: 5000M / Code 1.YS BRAND UV Mable Hot Stamping Foil 2.PVC marmar stamping hot Foilku wuxuu ku saleysan yahay suuqa oo ka soo baxay noocyo kala duwan oo kala duwan oo looga baahan yahay daboolka baaritaanka ka dib iyo cilmi baaris iyo horumarin ka dib markii si adag loo adkeeyo alaabooyinka cusub. 3.Intaa waxaa dheer, ka dib rinjiga UV, adayggiisa sidoo kale si weyn ayaa loo hagaajiyay, xirnaansho badan oo u adkaysta iyo xoqida u adkaysta, waana la nadiifin doonaa. Badeecadani waa mid ku habboon ...
1.Width: 1.26Meter 2.Code: YS-1052-2 3.Material ET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Grain Heat Transfer Transfer Foil 1.Badeecadani waxay khuseysaa guddiga qurxinta UV , oo inta badan laga isticmaalo KTV, hudheelada, hudheelada, naadiyada, goobaha lagu caweeyo, kafateeriyada iyo meelaha kale ee madadaalada heerkoodu sareeyo ee ku yaal qurxinta derbiga! Waxay noqon kartaa qaab marmar qeexitaan sare, hadhuudh iyo noocyo naqshad naqshadeysan. Ka dib dusha filimka wareejinta ee UV, dahaadhka PU wuxuu leeyahay dhejis wanaagsan. Badeecadani waxay ku habboon tahay ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1083 3.Material: PET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Design Hot Stamping Foil Waxyaalaha filimka kuleylka ah ee marmar waa in si tartiib ah loo dhigaa, toosan iyo taagan, laakiin ma ahan mid jiifa; waa inaan la dhigin meel u dhow isha kuleylka, waana in laga fogeeyaa isha kuleylka, guud ahaan 25 ℃; waa in si adag looga hortago in la wasakheeyo. Mar alla markii ay biyo baxaan, waxay ku dhalin doonaan gaas heerkulka sare iyo sou ...
1.Width: 0.64 meter / 1.26Meters 2.Code: YS-1526 3.Material: PET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code PVC marble hot stamping biil Filimka wareejinta kuleylka wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah. Si loo helo saamaynta ku dhufashada kulul, waa inaan si adag u xakameynaa heerkulka, cadaadiska iyo xawaaraha ugu fiican. Waxay leedahay tusmooyin xaddidan oo xaddidan: Go'aaminta heerkulka: marka heerkulku aad u hooseeyo, waxay u muuqan doontaa in kuleylka kulul uusan oolin ama uusan adkeyn, waxayna sidoo kale ka dhigeysaa daabacaadda daabacaadda ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YSD-1534 3.Material ET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Hot Stamping Foil Filimka wareejinta kuleylka wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah. Si loo helo saamaynta ku dhufashada kulul, waa inaan si adag u xakameynaa heerkulka, cadaadiska iyo xawaaraha ugu fiican. Waxay leedahay tusmooyin xaddidan oo xaddidan: Go'aaminta cadaadiska: cadaadiska ku dhufashada guud ahaan waa 4-6 kg / cm2. Marka cadaadisku aad u yar yahay, kama dhigi karo filimka shaabbada kulul inuu u hoggaansamo su ...
No.8 Jidka Wadada, Magaalada Anhua, Zhuji Deegaanka Warshadaha Xirmooyinka Casriga ah, Zhejiang, Shiinaha